हाम्रो कथा पिच गर्ने क्रममा हामीले जनस Less्ख्यक पाठ सिक्यौं | Martech Zone
हाम्रो कथा पिच गर्ने क्रममा हामीले जनसम्पर्क पाठ सिक्यौं
बुधबार, जुन 1, 2016 बुधबार, जुन 1, 2016 Douglas Karr
वर्षौं पहिले मैले मेकानिक्समा पोष्ट लेखें कसरी पिच लेख्ने मेरो दृष्टिकोणबाट प्रकाशनको रूपमा। मैले लेखमा उल्लेख गरेका अन्तिम चीजहरू मध्ये एक यो हाम्रो श्रोताको लागि प्रासंगिक हुनुपर्दछ। म एक कदम अगाडी जान्छु र त्यहाँ सबै हल्ला र बकवास पिचहरु संग, कि त्यहाँ एक राम्रो पीआर को अव्यवस्था को माध्यम बाट झार्न र हाम्रो प्रकाशन मा प्राप्त गर्न को लागी एक विशाल अवसर छ। तपाईलाई चाहिएको भनेको कथा हो।
प्रत्येक बिहान, म मेरो इनबक्स खोल्छु, र त्यहाँ एक दर्जन रोबो पिचहरू छन्। केहि पीआर ऑटोमेसन उपकरणहरू हुन् मलाई र अधिक र अधिक भन्दा बढी। केही केवल एक हो प्रतिलिपि र पेस्ट म किन पिच गर्दैछु वा किन मेरो दर्शकहरू खबर सुन्न चाहन्छन् भन्ने बारेमा कुनै विवरण बिना नै प्रेस विज्ञप्तिहरू।
तिनीहरू मध्ये केवल एक वा दुई मध्ये सबै मा एक कहानी छ। वास्तवमा, म प्राय: कम्पनीहरू जाँच गर्दछु जुन मैले प्रेस विज्ञप्तिमा पढेको थिएँ र पीआर व्यक्तिलाई मेरो आफ्नै पिचको साथ उनीहरूको कम्पनीले कसरी सहयोग गरिरहेको छ भनेर जवाफ दिन्छु। सबैभन्दा खराब कुरा, PR टोली प्रायः जवाफ दिन तयार हुँदैन, र केहि स्क्रिनसटहरू, एक उद्धरण, र मलाई उत्पादन परिदृश्य प्राप्त गर्न दिनहरू लिन्छन्। यो कसरी सम्भव छ?
स्थितिहरू रिभर्स गरौं
हामीसँग पिच गर्न एउटा कथा थियो!
हामीसँग एक शानदार सार्वजनिक सम्बन्ध टोली छ, Dittoe PR। इंडियानापोलिसमा प्रायः केही गनगनहरू हुन्छन् कि यदि तपाईं छानिएका केहीको हिस्सा हुनुहुन्न भने, तपाईले सम्भवतः स्थानीय समाचार बनाउनु हुन्न। हाईरिसिस खरीद गर्ने वा करोडौं डलर लगानी गर्ने कम्पनीहरूसँग हाम्रो व्यापार पृष्ठहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ।
पछिल्लो बर्षमा, हामी एक मा भारी लगानी पोडकास्ट स्टुडियो हामीले डाउनटाउन इन्डियानापोलिसमा निर्माण गरेका छौं। हामी हाम्रो पार्टनरहरूको साथ ठूलो वृद्धि देखिरहेका छौं वेब रेडियोको किनारा तर हामी कार्यक्रमहरू प्रदर्शन गर्न इन्डी बाहिर धेरै गाडी हाँकिरहेका थियौं। हामीलाई अतिथिहरू ल्याउन शहरको बीचबाट केही ब्लाकहरू सुविधाजनक स्थानको आवश्यक पर्‍यो।
स्टुडियोको निर्माण कार्य भयो। वास्तवमा, हामीसँग पहिलो पाहुनाहरू मध्ये एक इंडियानापोलिस मेयरको कार्यालय थियो! हामीले सोचेका थियौं कि यो अचम्मको खबर हो:
We डाउनटाउन इण्डियानापोलिसमा पोडकास्ट स्टूडियो लगानी गरेर निर्माण गरियो।
We एक स्टुडियो निर्माण गर्नुभयो जुन डाउनटाउन इंडियानापोलिसमा पहिलो प्रकारको थियो।
We नयाँ स्टूडियोमा पोडकास्टमा पहिले नै मेयरको अफिस थियो।
Dittoe PR थोरै पछि धकेल्‍यौं तर हामीले तिनीहरूलाई धक्का दियौं कि यो समाचार हो जुन स्थानीय मिडियालाई पिचिंगका लागि ठूलो थियो। डिट्टोलाई अर्को के हो भनेर थाहा छ ... र। माथिको पिचमा तीन खामाहरू छन् ... म आशा गर्दछु तपाईंले तिनीहरूलाई देख्नु भयोः
हामी, हामी, हामी
हाम्रो पिच हाम्रो बारेमा थियो। निस्सन्देह, डाउनटाउनको साथ त्यहाँ ट्यान्जेन्ट थियो तर यो अझै पनि हाम्रो बारेमा थियो। डिट्टोमा टिम फिर्ता आयो र हामीलाई यो समस्या थियो भन्‍यो। तिनीहरूले भने कि उनीहरूलाई आवश्यक छ हामी भन्दा ठूलो थियो कि एक कहानी र त्यो केमा हामीसँग मंथन गरियो।
यो पूर्ण समय हाम्रो अनुहारको अगाडि बसिरहेको थियो ... पोडकास्टिङ. पोडकास्टिंग लोकप्रियता मा फटिरहेको थियो धेरै वर्ष को लागि एक धेरै को लागी मिडिया पछि। त्यो मात्र होईन, तर हामी इंडियानापोलिस क्षेत्रमा पहिलो थिएनौं।
डेरिन स्निडर एकको साथ क्षेत्रमा स्थापित पोडकास्ट पेशेवर थिए अचम्मको स्थानीय संगीत पोडकास्ट। ब्राड शूमेकरले पहिले निर्माण गरे इन्डियानापोलिसमा समर्पित स्टुडियो - दुबै भिडियो र अडियोको लागि एक सुन्दर स्टुडियो। उहाँ हाम्रो प्रगतिमा परामर्श गर्न जारी राख्नुहुन्छ। बिल कास्कीको उन्नत बिक्री पोडकास्ट यति सफल भएको छ कि यसलाई सिन्डिकेशनको लागि छनौट गरियो। र एक दर्जन वा अन्य कम्पनीहरूले पोडकास्टि inमा भारी लगानी गरिरहेका थिए, सहित एन्जीको सूची.
अब त्यो कथा छ, हैन? हामी को सट्टामा, हामी, हामी, कहानी पोडकास्टिंग आन्दोलन थियो जुन त्यस क्षेत्रमा भइरहेको थियो! Dittoe कहानी पिच र यो तुरुन्तै लिइएको थियो। यो केवल उठाइएको थियो मात्र होइन, यसले मेरो मुस्कान मगले पहिलो पृष्ठ बनायो!
केही तर्क गर्न सक्छन् कि हामी लेखको साथ स्पटलाइट साझा गर्नुभयो। ठीक छ, डुह! स्पटलाइट सेयरिंगले कुनै पनि हिसाबले हाम्रो स्टुडियोको खबर र यस स्थानमा हामीसँग रहेको अधिकारलाई कम गरेको छ? होइन। यसको उल्टो, यसले हाम्रो क्षेत्रमा पोडकास्टिंग विशेषज्ञको रूपमा स्थापित गरेको छ।
कहानी तपाईं भन्दा ठूलो हुनुपर्दछ
Dittoe PR यस व्यायामको साथ हामीलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण पाठ सिकायो। र एक प्रकाशकको ​​रूपमा, म लज्जित हुनुपर्दछ कि मैले औषधी खाइरहेको थिएन जुन मलाई पिच गर्दै प्रत्येक सार्वजनिक सम्बन्ध व्यक्तिलाई दिइयो। कथा तपाईं वा मेरो बारेमा होइन, यो श्रोताको प्रभावको बारेमा हो। जब तपाइँले कुनै कथा शिल्प गर्न सक्नुहुन्छ कि यसले कसरी तपाइँ प्रकाशनहरू 'दर्शकहरू' जीवन, काम, अर्थव्यवस्था, खेल, आदि परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँ कहानी बेच्न लाग्नुहुन्छ। यो तपाइँको बारेमा होइन।
टैग: ब्राड जुत्ता निर्मातारचनात्मक ज़ोंबी स्टूडियोdarrin स्नाइडरdittoe पीआरवेब रेडियो को किनाराएज वेब रेडियोआइबीजेindianapolis पोडकास्टिंग स्टूडियोindyintuneमार्केटिंग पोडकास्टपिचपोडकास्ट स्टुडियोprपीआर पिचहरूसार्वजनिक सम्बन्ध
एक प्रभावी ट्रेड शो बुथ डिजाईनका E तत्वहरू
T सल्लाहहरू हजारौंलाई मार्केटिंगको भ्रम स्पष्ट पार्ने